I-Industrial Vacuum Ceramic Component nge Metallization China Manufacturer
Home > Imikhiqizo > I-metallized ceramics > Vula i-Ceramic Component > I-Industrial Vacuum Ceramic Component nge Metallization
Vala ingxenye ye-ceramic nge-metallization yizingxenye ezikhethekile kakhulu zezobuchwepheshe ze-ceramic kuhlelo lokusebenza lwe-elekthronikhi nolugesi. Ingakwazi ukufeza insimbi ku-ceramic ukujoyina ngebhande ngokusebenzisa i-solder elula noma enzima. Kukhona uketshezi oluncibilikisiwe olufakwe emzimbeni womzimba we-ceramic, njengama-moly-manganese noma i-Tungsten, bese kusetshenzwa ngokushisa okuphezulu. Uhlaka lwe-metallization luzohlanganiswa ngokuqinile nomzimba we-ceramic.
Ngemuva kwenqubo ye-metallizing, ngezinye izikhathi kudingeke ukuba kudingeke ukufakwa ngezinye izikhathi. I-plating evamile iyisi-nickel, igolide noma i-tin. Kuzothuthukisa ukuthungathwa kwebhande eliningi, futhi kuzovimbela ukwenziwa kwe-metallization ibe yikhiididi.
● Yamukela kalula i-Mo / Mn noma i-W ngokubheka ukushisa okuphezulu okushisa kwezinsimbi ezihlukahlukene ukuya emihlanganweni ye-ceramic
Amandla ethu Amakhasimende 'inzuzo
Ukuphawula: Sinikeza ezinye izitsha ze-ceramic zensimbi futhi, zifana ne-substrate yensimbi yensimbi, indandatho ye-ceramic ensimbi, ithini le-ceramic yensimbi njalonjalo.
I-Shenzhen Technical Ceramics
I-Ceramic Component yamadivaysi ayisisekelo wokuvota